eHimalaya Online || News from nepal » आफ्नै साना साना गल्तीले गर्दा बिग्रने गर्छन श्रीमतीहरु ।
आफ्नै साना साना गल्तीले गर्दा बिग्रने गर्छन श्रीमतीहरु ।
२०७७ माघ ११ गते आईतबार १२:३७
एजेन्सी :वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बि’ग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती, विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती, जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक...
एजेन्सी :वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बि’ग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती, विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती, जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् ।
आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु ग’लतबाटो रोज्न ? एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं । यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बिग्रिएका छन् ।
आमाबाबुको सबै कुरा सुन्नुपर्छ । बुहारी भित्र्याएपछि सासु बुहारीको झगडा परे पनि यो क्षणिक श्रीमान श्रीमतिको झ’गडा जस्तै हो । बुहारीसंग सासु नबोली पनि ती तपाईकी आमा हुन् । उनले तपाईको कहिल्यै कुभलो चिताउँदिनन् । त्यस्तैले श्रीमतीलाई भन्दाबढी आमा बाबुलाई बढी विश्वास गर्नुहोस् । श्रीमतीको विश्वासमा घरबार बि’गार्नेहरुको नै आफ्नै घरबार धेरै बि’ग्रिएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
अर्को कुरा तपाई विदेशमा गइसकेपछि बेला बेलामा श्रीमतीको मोबाइमा फोन गर्दै गर्नुपर्छ । तपाईलाई थाहै नहुने अर्को नम्बर पो चलाएको छ की यी सबैकुरा ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले को अवस्थामा सबै भन्दा बि’कृति मोबाइल र सामाजिक संजाल मार्फत भएको छ । श्रीमती को मोबाइल धेरै बिजी हुनु र विशेष गरि साँझ र रात को समय मा बिजी हुनु भनेको पनि खतरा नै हो । यस विषयमा घरमा भएका छोराछोरी वा अरु कुनै माध्यामबाट जानकार रहनुहोस् ।
कुनै समयमा बुढोको कमाइमा रजाइ गर्न पल्कीसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन तपाई संगै भएको बेलाका उनको मोबाइलमा मिस कल, रिसिभ कल, म्यासेज, डाइल नम्बर बारम्बार हेर्दै गर्नुपर्छ । यसले पारिवारिक कहल आउला भनेर कत्ति पनि नडाराउनुहोस् । किनकी श्रीमान श्रमतिको झ’गडा परालको आ’गो यस्सै भनिएको होइन । एक छिन झ’गडा भए पनि पुनः मिलन भइहाल्छ । यदि श्रीमति असल बाटोमा छिन भने अवस्य पनि झ गडा पर्दैन ।
यदी यही विषयमा पनि झग’डा हुन थाल्यो भने केही त गडबढी अवस्य छ भनेर चनाखो भने हुनैपर्छ । यदी बेला बेलामा आफन्त बाहेकका नम्बरबाट मिस कल आउने, म्यासेज आउने गरको छ भने पछि घरबार वि’र्गिन यसै छ त्यहीबेला नै बि’गारे भैगो नी होइन र त्यसैले जति सकिन्छ श्रीमतीलाई कन्ट्रोल बनाउनुपर्छ ।
यो सबैमा महिलामा लागू नहुने भए पनि पछिल्लो केही यस्तो घ’टना घ’टेका छन् । जुन तपाई हामीले सामाचारमा सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । त्यसैले आफू सचेत भइयो भने वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन विश्वको कुनै पनि कुनामा गए पनि तपाईले आफ्नो घर परिवार सुमधुर बनाउन सक्नुहुन्छ । तस्बिर: गुगल
प्रकाशित मिति २०७७ माघ ११ गते आईतबार १२:३७